Ukudala uhlelo kungase kutholakale ulwazi olunembile olusekelwe amaqiniso ukuthi kungaqinisekiswa noma, kunalokho, ukuze aphike, kuba umsebenzi oyinhloko zonke isayensi. Ngo biology njengoba: idatha njalo inselele futhi avunyelwe kuphela uma banayo isiqinisekiso esibalulekile.
Kuze kube manje, lo cwaningo ubheka bonke izinhlelo ophilayo. Ukuze kahle ukuhlola inhlangano yabo nemisebenzi, umsuka, ukusatshalaliswa, kanye nekusungulwa nekwetfulwa uxhumano nomunye, ngenhloso yokufunda kanye Ukukhetha kwemithetho ethile, izindlela zocwaningo ezilandelayo elisetshenziswa biology:
1. Ukuqhathanisa - ikuvumela ukuba ufunde ngokuqhathanisa lokufanako nalokwehlukile emkhatsini eziphilayo futhi izingxenye zazo. Idatha etholwe enze kube nokwenzeka ukuba sihlanganise emaqenjini zezitshalo nezilwane. Le ndlela isetshenziswa ukudala theory cell, systematics futhi ukuze uqinisekise ukuthi imfundiso yokuziphendukela kwemvelo. Okwamanje, isetshenziswa cishe zonke izindawo lokhu isayensi.
2. okuchazayo Izindlela e Biology (observation, izibalo) - zikuvumela ukuba ahlaziye futhi ukuchaza izenzakalo ezenzeka ngokwemvelo, ukuqhathanisa lawo, ukuthola imithetho ethile, kanye Kufinyeta, ukuthola izinhlobo ezintsha, amakilasi, nokunye. Lezi zindlela zaqala ukusetshenziswa ngisho endulo, kodwa kuze kube manje awalulahlanga ukuqondana abo futhi kabanzi ezesayensi yezitshalo ethology, ngokuphila kwezilwane kanye nokunye. D.
3. zomlando - kwenza kube lula ukubona amaphethini imfundo nentuthuko ezingeni lekuphila izinhlelo, izakhiwo zawo kanye nemisebenzi, ukuqhathanisa nabo Amaqiniso aziwayo. Le ndlela eyayisetshenziswa Darwin ukwakhiwa umbono wakhe, futhi wasiza uguqule wesayensi yezinto eziphilayo owayevela isayensi achazayo ukuchaza.
4. kokulinganisa izindlela zocwaningo eziphilayo:
a) Awokuzenzisa - ikuvumela ukuba ufunde iyiphi inqubo noma mkhuba, kanye isiqondiso yokuziphendukela kwemvelo by recreating kubo njengesibonelo esebenzisa ubuchwepheshe yesimanje kanye nemishini;
b) Ukuhlolwa (isipiliyoni) - ekudalweni yokufakelwa endaweni isimo elawulwa, esiza ukuthola izakhiwo ezifihliwe ngokujulile lezinto eziphilayo. Le ndlela kusiza cwaningo imihlola todvwa, ukuze ukwazi ukufeza imiphumela uphinda ukudlala lezi zenzakalo ofanayo izimo ezifanayo.
izindlela kokulinganisa eziphilayo akuzona kuphela ucwaningo futhi bathole izimpendulo zemibuzo yabo, kodwa futhi ukunquma ukuthi zavela ekuqaleni umbono Ukutadisha impahla, kanye ukulungiswa yayo msebenzi.
Ngo zenzeka ekhulwini lamashumi amabili, lezi zindlela uholela ucwaningo kule isayensi ngenxa ukuvela imishini yesimanje for ucwaningo, ezifana, isibonelo, tomography, electron microscope nokunye.
Okwamanje, izindlela kwamakhemikhali kabanzi biology zokuhlola, -X-ray ukuhlaziywa, chromatography, futhi inqubo ultrathin izigaba, izindlela ezehlukene kulinywe, nabanye abaningi.
izindlela kokulinganisa, kuhlangene indlela ehlelekile wandisa amakhono lolwazi wesayensi yezinto eziphilayo futhi ngavula imigwaqo emisha isicelo ulwazi cishe kuzo zonke izindawo umsebenzi womuntu.
Lezi izindlela zocwaningo emkhakheni wezinto eziphilayo, musa ucede wonke arsenal izindlela yokuthola ulwazi kwezesayensi, ngakho akunakwenzeka ukuba afeze umngcele esiqinile phakathi kwazo. Sisetshenziswa ndawonye nomunye, benza kungenzeka ukuthola izenzakalo ezintsha kanye izakhiwo izinhlelo siphila enkathini esifushane, futhi ukusungula regularities lendabuko yalo, ukuthuthukiswa kanye nokusebenza.